Tanora Iraniana Miatrika Fanamelohana Ho Faty Noho Ny Lahatsoratra Manohitra Ny Islamo Tao Amin’ny Media Sosialy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Marsa 2017 14:15 GMT
Vakio amin'ny teny English, Ελληνικά, Español, русский, English
Sina Dehghan miatrika fanamelohana ho faty noho ny lahatsorany mitsikera ny Islamo izay navoakany tao amin'ny fantsona an-tserasera ho an'ny daholobe fony izy 19 taona. Sary nozaraina betsaka tao amin'ny media sosialy.
Raha mampiasa ny tetika fanaraha-maso manaraka ny toetr'andro mba hanaraha-maso ny seraseran'ireo mety ho lasa na efa mpampihorohoro matanjaka ireo fitondram-panjakana manerana izao tontolo izao, dia manenjika ireo izay “mampihorohoro” ny fahamasinan'ny ny fitondrana Islamika ao amin'ny sehatry ny fifandraisandavitra nomerika kosa ny governemanta Iraniana.
Sina Dehghan, 21 taona, miaramila iray teo taloha no niaina izany mivantana. Nosamborina izy tamin'ny taona 2015 noho ireo lahatsorany tao amin'ny media sosialy. Voaheloka ho faty izy, ary miandry ny anjarany ankehitriny .
Tamin'ny faha-19 taonany, nosamborin'ny mpiambina Revolisionera, tompon'andraikitra elatra ankavanan'ny tafika Iraniana tao amin'ny biraon'ny Mpitarika Faratampony, i Dehghan raha mbola teo am-panatanterahana ny raharaha miaramilany tao amin'ny tobin'ny tafika iray tao Tehran noho ny andian-kafatra ho an'ny daholobe izay nalefany tao amin'ny sehatra fandefasan-kafatra LINE. Nilaza tamin'ny Foiben'ny Zon'Olombelona ao Iran ny loharanom-baovao fa manohitra ny finoana Islamo sy ny Koràny ny lahatsorany.
Nosamborina niaraka tamin'ny olona roa hafa izy, Sahar Eliasi sy Mohammad Nouri no anaran'ireo, izay nolazain'ny manampahefana fa niaraka tamin'i Dehghan tamin'ny famoahana ny lahatsoratra. Nomelohina avokoa izy telo tamin'ny fandraisana anjara tao amin'ny fantson'ny media sosialy izay nanivaiva na nanakiana ny finoana Silamo. Nahena ho telo taona ny sazin'i Eliasi taorian'ny fampakarana ny raharaha ary mbola miandry ny didim-pitsarana kosa i Nouri . Nohamafisin'ny Fitsarana Tampony ao Iran ny fanamelohana an'i Dehghan ho faty tamin'ny faran'ny volana Janoary 2017 teo.
Miankina amin'ny fiaikeny heloka ny raharaha hanenjehana an'i Dehghan ary noterena mba hanome antony hosoka izy. Nandritra ny fisamborana azy, nofitahin'ny mpiambina Revolisionera i Dehghan tamin'ny filazana fa ho afaka izy raha miaiky ny fiampangana azy tamin'ny “fanivaivana” ny Mpaminany Mohammad sy manao sonia ny taratasy fibebahana.
Nofitahin'ny mpiambina Revolisionera i Dehghan tamin'ny filazana fa ho afaka izy raha miaiky ny fiampangana azy tamin'ny “fanivaivana” ny Mpaminany Mohamady sy manao sonia ny taratasy fibebahana.
Milaza ny andininy faha-262 ao amin'ny Fehezan-dalàna Famaizana Islamika ao Iran izay manameloka ny mpanohitra sy ny mpitsikera fa heloka mahazo fanamelohana ho faty ny fanivaivana ny Mpaminany. Na izany aza, milaza ny andininy faha-263 ao amin'ny fehezan-dalàna fa afaka ahena ho kapoka miisa 74 ny sazin'ny voampanga raha milaza amin'ny fitsarana izy fa vokatry ny fahatezerana sy ny fahadisoana ny fanompana.
Tsy nanararaotra ny Andininy faha 263 i Dehghan tamin'ny fanerena azy hiaiky heloka ary tsy namela azy hanao izany koa ny mpisolovavany. Tsy nanam-bola hakana mpisolovava manokana ny fianakavian'i Dehghan, ka dia nahazo mpisolovava voatendrin'ny fitsarana izy, izay nolazain'ny Foiben'ny Zon'Olombelona ao Iran fa tsy mahavita hiaro azy araka ny tokony ho izy mandritra ny fitsarana azy .
Mba hanasarotana bebe kokoa ny raharahan'i Dehghan tsy ara-drariny, nilaza tamin'ireo mpanohana ny loharanom-baovao izay nangataka ny tsy fitononana anarana noho ny antony ara-piarovana fa nampanantena ny fianakaviany ny manampahefana ara-piarovana sy ara-pitsarana fa ho tsara kokoa ny herijikan'i Dehghan amin'ny fanafahana azy raha toa ka mampiato ny famoahana ny raharahany izy ireo. Tamin'ny faramparan'ny volana Martsa, nanomboka nanao antso tamin'ny manampahefana mba hiaro ny ainy ireo Iraniana tao anatiny sy ivelan'ny firenena niaraka tamin'ny fanantenana kely fa hivadika ny sazy tamin'ny volana Janoary .
Voaheloka ho faty i #Sina_Dehghan noho ny famoahana votoaty “Anti-Islamika” tao amin'ny Media Sosialy tao Iran. Tsy maintsy #ManavotraniSina isika.
Tena mampalahelo tokoa ny raharahan'i Dehghan satria efa nanokana ezaka be ho an'ny tafika ao amin'ny firenena izy sy ny fianakaviany. “Maritiora” ny raibeny (na miaramila lavo ) tamin'ny adin'ny Iran sy Iraka, raha nanompo ny tafika Iraniana nandritra ny roa taona kosa i Dehghan .
— Mohsen Tavoli (@MTavoli) March 24, 2017.
Maritiora tamin'ny ady nandritra ny valo taona ny raiben'i Sina. Nanompo ny tafika nandritra ny roa taona i Sina. Manan-jo bebe kokoa noho ny ankamaroan'ireo manampahefana eto amin'ity firenena ity i Sina .
Fampahatsiahivana mampieritreritra momba ny fandrahonana ny fiarovana izay hatrehan'ny Iraniana an-tserasera ny raharahan'i Dehghan. Raha matetika heverina ho toy ny fiarovana lehibe indrindra ho an'ny olona iray ny fiarovana ny seraserany manokana manoloana ny governemanta, dia mety ho marefo ihany koa ny olona iray eo anatrehan'ny fahatezeran'ny rafitra tsy ara-drariny mpanao heloka bevava ihany koa ny sary sy ny teny navoakany ampahibemaso.
Na dia ny fanafenantsoratra faran'izay matanjaka indrindra eo amin'izao tontolo izao aza dia tsy afaka miaro ny Iraniana tsy ho voasazy noho ny fanehoany an-kalalahana sy an-tserasera ny heviny.